9. Epreli 2020 Oliver Bienkowski
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 9. Epreli 2020
Nceda unikele ku-paypal@PixelHELPER.tv ngezenzo ezingaphezulu ezinxamnye nokumkani
Ibhola ekhatywayo ehamba ze. Inkosi yaseThailand ithathe ukhuseleko kwiprojekthi yeXXSoccer evela kuPixelHELPER. Kumdlalo wokuqala amanenekazi angama-26 avela kwiindawo zabafazi ayakhuphisana ngokuchasene, uRama X. ngusompempe, ookumkanikazi bakhe babini bakora.
Ngoku sijonge ibala lebhola, ukunxiba iimpahla zokunxiba kunye nokusasaza umdlalo kwi-livestream. Sixhase apha:
Sibhiyozela idemokhrasi eThailand ngoJuni 24, 2020. Ibhendi uFaiyen uyithethile intetho yenkosi yokurhoxa
Yabulawa iRama X.
UThais olwela inkululeko kunye nenkululeko yokuthetha axhasa i-PixelHELPER Foundation yamazwe onke ukuba iphumeze iphulo lokulwa uKing Vajiralongkorn waseThailand, inkosi enoburhalarhume nenobundlongondlongo, ngoncedo lwabamanyani bayo, ilawula uloyiko kunye nokusongelwa emkhosini.
Inkosi eneminyaka engama-67 ubudala yaba ngukumkani ngonyaka ka-2017, kodwa kunzima ukuchitha ixesha eThailand. Kwiminyaka eliqela uchithe ixesha lakhe elininzi kwiGrand Hotel Sonnenbichl kwisixeko saseJamani iGarmisch-Partenkirchen, kunye neqela labasetyhini abangama-20 kunye neqela labasebenzi abangaphezu kwe-100 kunye namagosa ebhotwe.
Uninzi lwabasetyhini kwi-harem yakhe kunye nabasebenzi kumadoda akhe angamabanjwa eJamani. Abafuni kukhonza iVajiralongkorn, kodwa abanakho ukukhetha. Imithombo esebenzela inkosi yaseBavaria ithi abasebenzi abangamkholisiyo bayabethwa rhoqo kwaye bakatswa zii-henchmen zikaVajiralongkorn njengesohlwayo. Izibetho zenziwa ngenxa yokuba iVajiralongkorn ithanda ukubukela iividiyo zabanesifo.
E-Thailand, inkosi yamisa inkampu yejele kunye nesohlwayo kwenye yezigodlo zayo. Amagosa nabasebenzi basemkhosini banokuthunyelwa apho kangangeenyanga ngotywala oluncinci. Baphethwe, babethwe kwaye baphathwa kakubi kwi-oda yeVajiralongkorn.
Ubuncinci abantu abathathu abasebenzela inkosi beswelekile kule minyaka idlulileyo. Ibhotwe libanga ukuba bobabini bazibulala kwaye owesithathu wabulawa sisifo segazi, kodwa yinto eyaziwayo ukuba bobathathu bathuthunjiswa babulawa.
Ukusukela ngonyaka ka-2016, abenzeli abalishumi elinanye baseThailand abalwela inkululeko. Kukho ubungqina obugqwesileyo bokuba babulawa ziiarhente zobuntlola zaseThai ezilandele imiyalelo kaVajiralongkorn.
Ukumkani ungaphezulu komthetho eThailand kwaye unokwenza into ngokungathintelwa. Umgaqo-siseko umnika amandla agqibeleleyo kwaye akukho mntu unokuzisa izityholo zoluntu nezolwaphulo-mthetho.
Ukhuselwe kwaye uxhaswe ngamajenali e-Ultra-asebukhosini abakhokela imikhosi yase-Thai. Umkhosi waseThai, njengobukhosi, lutshaba lwedemokhrasi. Kule nkulungwane idlulileyo, umkhosi uloyisile amandla izihlandlo ezilishumi elinambini kwimikhosi yomkhosi kwaye uhlala ungenelela kwezopolitiko. I-Thailand ayizange ikwazi ukuvelisa inkululeko yedemokhrasi ngenxa yokuba i-monarchy kunye nomkhosi baye benza iyelenqe lokujongela phantsi umgaqo-nkqubo wonyulo. I-Vajiralongkorn ikukuyalela ngqo komkhosi wamajoni angaphezu kwe-50.000 XNUMX eRoyal Guardian eThailand ukucinezela nakuphi na ukuphikisana.
Amaxesha amane kwimbali yanamhlanje yeThailand - 1973, 1976, 1992 kunye no-2010 - umkhosi waseThai wabulala abantu abaqhankqalaza kwizitrato zaseBangkok befuna inkululeko. Umkhosi ubulele abantu baseThai abangaphezulu lee kunabo babulala amajoni angaphandle kwimfazwe yokwenene.
UVajiralongkorn ngoku kumtshato wakhe wesine. Wemka ke kwaye wamhlazisa umfazi wakhe wokuqala emva nje komtshato wabo, wamgqibela ke ukuba ahlukane naye. Umfazi wakhe wesibini wagxothwa eThailand ngonyaka ka-1996 kunye noonyana bakhe bobabini. Uqhawule umtshato nomfazi wakhe wesithathu ngonyaka ka-2014, wamnyanzela ukuba aboshwe endlini, kwaye waqalisa ukucoca ngesihluku kusapho lakhe. Abazali bakhe, abantakwabo abathathu, udadewabo, umalume wakhe kunye nezinye izalamane ezininzi babanjwa.
UVajiralongkorn utshatele ukumkanikazi wakhe okhoyo kunyaka ophelileyo, kodwa kunqabile ukuba ambone kwaye ukhetha ukuchitha ixesha elininzi kunye nomakazi wakhe eGrand Hotel Sonnenbichl ngelixa umfazi wakhe ehlala kwihotele kwisixeko saseSwitzerland i-Engelberg.
I-Vajiralongkorn ngukumkani osisityebi emhlabeni onobutyebi obungaphezulu kwe-50 yezigidi zeerandi. Kodwa obu butyebi abonelanga kuye - minyaka le ufuna isixa esikhulu kuhlahlo-lwabiwo mali, exhaswa ngumhlawuli werhafu waseThai. Kulo nyaka inkosi iya kufumana ngaphezulu kwe-815 yezigidi zeerandi kuhlahlo-lwabiwo mali lwaseThai.
Abantu abaqhelekileyo banqwenela kwaye babulawa yindlala njengoko ubhubhani we-Covid-19 etyhutyha iThailand nakwihlabathi liphela, ngelixa inkosi kwiGrand Hotel Sonnenbichl iphila ngokunethezeka, ichitha iimali ezinkulu zerhafu, kwaye ixhaphaza i-harem yayo kunye nabasebenzi bayo. Abasebenzi abethwa kwaye baphathwa gadalala, abanangxaki yokunxibelelana namapolisa aseJamani kuba boyika ukuba iintsapho zabo zingaphindiswa eThailand.
Uninzi lwamaThais luyabazi ubugwenxa babo nokukhohlakala, kodwa amazwi abo athulisiwe yimithetho yedroni. Nabani na ogxeka ubukhosi busemngcwabeni kwiminyaka eyadlulayo.
AyingoThais kuphela onengxaki kuKumkani Vajiralongkorn. Ubuye abatyhafise abarhafi baseJamani kuba urhulumente kufuneka ambhatalele ukhuseleko nokhuseleko. Wenza ukwaphulwa kwamalungelo oluntu kumhlaba waseJamani-ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kunye nokuphathwa gadalala kwabasetyhini kunye nokuphathwa gadalala kwabakhonzi bakhe, abaphatha njengamakhoboka. AmaJamani akufuneki akunyamezele oku kwilizwe labo.
Ke ngoko, abalwela inkululeko baseThai baxhasa iPixelHELPER Foundation ukuthatha amanyathelo kunye.
Sifuna ukuba ilizwe lifunde ngenkohlakalo kunye nekhoboka leVajiralongkorn.
Sifuna iJamani imkhuphe kuba waphule imithetho eliqela.
Sifuna ukuba agwetyelwe eThailand ngamatyala akhe.
Kwaye asizukuyeka iphulo lethu ade athunyelwe ekhaya ukujongana nobulungisa.
Ukuba uyasixhasa, nceda usithumelele umyalezo kwaye unikele kuPixelHELPER kwiwebhusayithi yethu: https://pixelhelper.org/en/hilfe/
Sisonke sinokuthi siwuphelise ulawulo luka-Vajiralongkorn lokoyika nokuzisa idemokhrasi yokwenene eThailand.
Ingxowa-mali yokuKhuselwa kwentando yesininzi yaseThai Epreli 14th, 2021Oliver Bienkowski